FAALLO :- TURXAAN BIXINTA IYO TOOSINTA SHAQADA QARANKU WAXAY QAYB KA TAHAY HADAFKA IYO SIYAASADDA MADAXWEYNE GAAS.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdi-weli Max’ed Cali Gaas wixii ka danbeeyey markii loo doortay hogaaminta Puntland sanadkii hore 2014-kii waxa uu samaystay qorshayaal kala duwan kuwaas oo salka ku haya sidii turxaan bixin iyo toosin rasmi ah loogu samayn lahaa shaqada qaranka si meesha looga saaro wax kasta oo nidaam xumo iyo khaladaad ku noqon lahaa nidaamka Dawladnimo ee Puntland.
Waxa uu qaaday tallaabooyin aanay hore u qaadin Dowladihii hore ee Puntland soo maray, taasoo ahayd inuu safaro kala duwan ku tagay gobolada Puntland safaradaas oo ujeedkoodu ahaa sidii ay xukuumaddu u ogaan lahayd baahiyaha dhabta ah ee ay qabaan bulshadu isla markaana Dawladda iyo shacabkuba ay si dhow isaga warqabi lahayeen, waxaa kale oo meesha aan ka maqnayn ku tala galka madaxweyne gaas ee uu ku doonayo in maamulka la baahiyo tuulo, degmo ilaa caasimada dalka.
Safaradii aadka u ballaarnaa ee Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr Cabdiweli Gaas uu kusoo kala bixiyay gobolada Puntland waxaa ay sidoo kale meesha ka saareen sumaddii hore u jirtay ee ahayd “Gaari Waa” maadaama uu booqashao ku tagay dhulalka fog-fog ee ku teedsan gobolada Puntland, waxayna noqotay markii horaysay taariikhda Puntland oo madaxda dalka ugu sareeyaa ay laamiga ka degeen isla markaana ay tageen dhul aan hore loo tagi jirin.
Marka la eego shaqooyinka wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee Dawliga ah waxaa Madaxweyne gaas uu ka qabtay waxqabad muuqda , waxaana uu ku tala galay in wasiirka kasta uu u madax banaa-naado shaqadiisa oo aysan jiri karin cid ku fara gelisa meeshana laga saaro kalmadii ahayd “Madax-Kanool” oo macneheedu yahay in madaxweynaha oo kaliya wax laga sugo ama uu isagu qabto shaqooyinkii ay wasaaraduhu qaban lahaayeen .
Nidaamka shaqaalaynta iyo shaqada qaranka waxa uu Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr Cabdiweli Gaas ku sameeyey dib u habayn ama “Reform” taasi oo macneheedu ahaa in shaqo kasta loo helo dad aqoon u leh oo qaban kara dib u eegisna lagu sameyo nidaamka shaqaalaynta qaranka.
Wasaaradaha shaqeeya dhamaantood waxaa nidaamka shaqaalaynta ku saleeyeen imtixaan furan oo cid kasta ka qayb gali karto, isla markaana waxay qaateen cidii ku guulaysatta imtixaanaadkaasi, taasi oo ilaa hada ka socota wasaaradaha dalka.
Sidoo kale waxaa uu Madaxweyne Gaas ku tala galay in “Reform” lagu sameeyo nidaamka garsoorka dalka, dhaqaalaha dalka iyo arimo kale, taasoo macneheedu yahay in la toosiyo oo la turxaa bixiyo shaqooyinka Dowliga ah ee Puntland si loogu tallaabsadi is beddel la isku hallayn karo.
Intaas oo arrimood waxaa Dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Gaas ay ka mid yihiin qorshayaasheeda shaqo ee ay qabanayso sanadka kasta ilaa laga gaarayto sanadka5-aad ee waqtigeedu ku egyahay oo ku aadan 2019, waxaana jira in Madaxweyne Gaas uu guddiyo kala duwan u sameeyey shaqooyinka Reform-ka ama dib u habaynta.
Tallaabooyinkaas iyo kuwo kale oo tira badaniba waxay saldhig u ahaayeen toosinta iyo turxaan bixinta shaqada qaranka ee uu ku tallaabsaday Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdi-weli Max’ed Cali Gaas.
Waxaana si dhab ah u muuqata in Dowladda Puntland ee uu xiligan hogaankeeda hayo Madaxweyne Dr. Cabdi-weli Gaas iyo ku xigeenkiisa Cabdixakiin camey ay guulo rasmi ah kasoo hooyay qaar ka mid ah ballan qaadyadii ay sameeyeen waqtigii masuuliyadda dalka loo dhiibay.
Xafiiska Warfaafinta, Wacyi-gelinyta, Hiddaha Iyo Dhaqanka Ee Madaxtooyada Puntland